Twin Seoul nesigaba esigabeni sesithathu njengoba "crisis" kuyinto
トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Twin Seoul nesigaba esigabeni sesithathu njengoba "crisis" kuyinto
izangoma bangempela [3500 yen asihlole Mahhala] ukuthola indlela
twin Seoul umhlangano, umphefumulo uzobe ukunyathela ezigabeni eziyisikhombisa njengoba ukulungiswa lokugcina babe munye. Kufeza senzakalo esishaqisayo e esigabeni sokuqala, kodwa uzozibonela Awakening ezingokomoya, bese kuba esigabeni sesibili sabanjwa isipiliyoni kanye lwati lolutfolakele ngosuku kwansuku ukuthi yasetshenziswa banendaba ngomunye nomunye, abaphikisi ngu ukuzazisa etholwe imprinting noma ngicabanga ukukhathazeka noma ukungabaza.
futhi esigabeni esilandelayo esigabeni sesithathu. Kulesi sigaba, ke kulahliwe ukuzazisa lakhiwe kuze kube manje, ukuthi ungakwazi ukwenza ukushiya umphefumulo ukuheha nomunye kuyisihluthulelo. Nokho, labo abaye waba munyu ngu esidlule uthando isipiliyoni, ukulahla ukuzazisa kutshalwa kokuhlangenwe nakho ukuthi very scary, kuyoba nzima nakakhulu.
Ngakho-ke, kuyoba ubuhlungu ngeke kulahliwe ngokuphelele ukuzazisa komunye nomunye. Lokhu kubuye ukuhlolwa esiye eziphoqelelwe ukuze umphefumulo babe munye futhi ngiphapheme ngokomoya ngokuphelele, iwele ngempela Seoul kumelwe azinqobe nalolu sizi kuyinto ngeke sibe munye.
kulesigaba kuhambisana ubuhlungu enkulu, kodwa noma ngeke indlela iya belwa iphuzu ukuzazisa. Njengoba ayevaleleke umqondo uthando
esiteji wesithathu ukushayisana ubizwa ihlushwe uthando
? esidlule okunemibandela okwenzeka nge umphefumulo ayiwele naye, by esidlule uthando nakho yabo siqu, okwakubekelwa nakho esigabeni sesibili nokukhathazeka, ngemuva kokuxinwa ungabaza kwenye inhlangano, ongaphika enye inhlangano ayikwazi ukumelana ukuhlupheka. Kuze kube manje uthando akulona uthando umphefumulo ayiwele naye, kuba nalezo ku-eziphoqelelwe kwezinye izimo komunye nomunye, kodwa kungaholela ukuthi lalizoliyeka nezinye eceleni ayithethelele ukuze isimo.
Nokho, esikhundleni uthando odlule ezinemibandela esigabeni sesithathu, ke izinyathelo isaziso ukuba nimthande umlingani ngokungenamibandela. Ngakho-ke, wazibonela ukuthi esikhathini esidlule, umqondo uthando alahlwayo okunemibandela Kuphakathi Terra kubalulekile.
esidlule uthando isipiliyoni
? nokukhathazeka kakhulu ingagxili ukungabaza zishayisane enye inhlangano, awusebenzi balahlwe kalula. Ukukhathazeka ukungabaza ukuthi livela lo mqondo, e esigabeni sesithathu iyoba makhulu. Khona-ke, ayisekho silondoloze ukuzinza imizwelo, kuyoba njalo umlingani kanye izikhathi eziningi etholana phezulu.
naphezu ngakho yisimo esibuhlungu, namanje abantu ababili ukuheha nomunye kakhulu uzoqhubeka tryst. Ngamanye amazwi, ukuze kuhlangatshezwane njengoba ebambe ukuhlupheka okukhulu ukuthi livela ukukhathazeka nokungabaza, awusebenzi ukubaleka ukuhlupheka.
umphefumulo twin ngokusebenzisa le isigaba
esigabeni sesithathu ku ukwehlukana esigabeni, uzobe eziphoqelelwe osizini olukhulu. Uma kungenjalo siqambe ukuzazisa of kuze kube manje, kukhona uzophinde okumelwe zithuthukiswe kuleso ezingqubuzana umphefumulo ukuthola izinto ezimbili abantu ukulwa enkulu. Ngakusasa zalesi sigaba, ukwehlukana esigabeni ulinde.
Nokho, nekhululekile ukuthuthukisa nomunye ngemva ngokwahlukana, uma wazi lokuthi kukhona iyadingeka futhi ulahle ukuzazisa, singakwazi ngasekupheleni esigabeni. Indlela zingamelana le nkathi ibalulekile.
Ngo phansi, kuyothiwa eziphoqelelwe osizini olukhulu. Uma kungenjalo siqambe ukuzazisa of kuze kube manje, kukhona uzophinde okumelwe zithuthukiswe kuleso ezingqubuzana umphefumulo ukuthola izinto ezimbili abantu ukulwa enkulu. Ngakusasa zalesi sigaba, ukwehlukana esigabeni ulinde.